Displaying items by tag: prepare for exam
Tuesday, 14 January 2020 15:15
"တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများ စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ အချက် (၁၁) ချက်"
စာမေးပှဲနီးနပွေီဖွဈတဲ့ကငျြေးသားတှအေတှကျ စာလလေ့ာတဲ့အခါ မွနျမွနျဆနျဆနျမှတျမိလှယျပွီး လှယျလှယျနဲ့ မမအေ့ောငျ ဘယျလိုပွငျဆငျရမလဲဆိုတာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Friday, 13 September 2019 17:57
"စာမေးပွဲဖြေခါနီး စိတ်ဖိစီးမှုများတတ်သူတွေအတွက် လိုက်နာရမယ့်အချက်(၅)ချက်"
စာမေးပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်ကျက်ထားတဲ့စာတွေ မေ့ကုန်ပြီလို့ ထင်မိတာ၊ ကျက်ရမယ့်စာတွေကို လုံလုံလောက်လောက် မရသေးဘူးလို့ထင်မိတာ စတဲ့အချက်တွေက စာမေးပွဲဖြေမယ့်သူတွေကို ဖိအားဖြစ်စေပါတယ်။
တချို့ဆိုရင် စာမေးပွဲခန်းထဲဝင်ခါနီးမှ မူးလဲတာတို့ဘာတို့ ဖြစ်တဲ့အထိ ဖိအားတွေများတတ်ကြတယ်။ ဒီတော့ စာမေးပွဲဖြေခါနီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အောက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေကို သုံးပြီး ဖြေရှင်းကြည့်လိုက်နော်…။
(၁) တစ်နေ့ကို (၇)နာရီ ပုံမှန်အိပ်ပါ
အိပ်ရေးမ၀တာတွေ၊ အိပ်ချိန်မမှန်တာတွေက သင့်ဦးနှောက်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအင်တွေကို လျော့နည်းစေမှာဖြစ်ပြီး သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ်။
စာကို အကြာကြီးအာရုံစိုက်ပြီး ကျက်နိုင်တာမျိုးလည်းမရှိတော့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားမလိုအားမရ ဖြစ်လာမှာမို့ အိပ်ချိန်မှန်မှန်နဲ့ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပေးတာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။
(၂) မနက်စောစော စာကျက်ပါ
မနက်စောစော ကျက်တဲ့စာတွေက ဦးနှောက်ထဲမှာ စွဲမြဲစေသလို ပိုပြီးလည်း မှတ်မိလွယ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးဝတဲ့မနက်တွေဆိုရင် စိတ်က လန်းဆန်းနေလို့ ကျက်သမျှစာတွေကို မှတ်မိဖို့ ကူညီပေးတယ်။
ဒီတော့ ညပိုင်းအချိန်တွေထက် မနက်ခင်းတွေမှာ စာကျက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း သင့်ရဲ့စာမေးပွဲအချိန်တွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ ကြိုးစားပါနော်။
Read More >>> Physics ကို လျှော့မတွက်နဲ့!
တစ်ဖက်မှာ အိပ်ချိန်မှန်မှန်နဲ့ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ဖို့ လိုအပ်သလို တစ်ဖက်မှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အာဟာရဖြစ်မယ့် အစားအစာတွေကို ပုံမှန်စားပြီး အားဖြည့်ပေးသင့်ပါတယ်။
စာမေးပွဲနီးတဲ့အခါ ပုံမှန်ထက်ပိုတဲ့ ဖိအားတွေကြောင့် အစားအသောက်ပျက်နိုင်တာမို့ အစားအသောက်ပိုင်းကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
တရားထိုင်တယ်ဆိုတာ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်လာအောင် ကြိုးစားတာပါပဲ။ တရားထိုင်တာက သင့်ရဲ့စိတ်အတွက် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပိုလို့ မြင့်မားလာစေမှာဖြစ်ပြီး မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအားကိုလည်း ပိုကောင်းလာဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင် စာကျက်တဲ့နေရာမှာ ပိုပြီး အထောက်အကူဖြစ်ပြီပေါ့။
ငါ ဖြေမှဖြေနိုင်ပါ့မလား၊ ငါမဖြေနိုင်ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ၊ ဆိုပြီး အများကြီးတွေးပူနေမိတာကလည်း သင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကို အမြန်ဆုံးမြင့်တက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
အတွေးတွေများလာလေလေ ဦးနှောက်က အလုပ်လုပ်ဖို့ နှေးကွေးသွားလေလေဖြစ်လို့ စာကိုလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ မှတ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ စာမေးပွဲနီးလာပြီဆိုရင် စာကျက်နေဖို့ကလွဲလို့ တခြားအတွေးတွေကို ခေါင်းထဲကနေ ထုတ်ထားလိုက်ပါ။
Read More >>> နောက်လဆိုရင်ပဲ ကျောင်းပြီးကြတော့မယ်….ကျောင်းပြီးရင် ဘာလုပ်ကြမှာလည်း?
>>> Unicode Version<<<
စာမေးပြဲနီးလာတာနဲ့အမွ် ကိုယ္က်က္ထားတဲ့စာတြေ မေ့ကုန်ပြီလို့ ထင္မိတာ၊ က်က်ရမယ့်စာတြေကို လုံလုံလောက်လောက် မရေသးဘူးလို့ထင္မိတာ စတဲ့အခ်က်တြေက စာမေးပြျဲေဖမယ့်သူတြေကို ဖိအာျးဖစ်စေပါတယ်။
တခ်ို့ဆိုရင် စာမေးပြဲခန်းထဲဝင္ခါနီးမွ မူးလဲတာတို့ဘာတိျု့ဖစ္တဲ့အထိ ဖိအားတြေမ်ားတတ်ကြတယ်။ ဒီတော့ စာမေးပြျဲေဖခါနီျးဖစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္ဖိစီးမှုတြေပ်ာက်အောင် ဘယ္လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အောက္ပါနည်းလမ်းလေးတြေကို သုံးပြီးျေဖရွင်းကြည့်လိုက်နော်…။
(၁) တစ်နေ့ကို (၇)နာရီ ပုံမွန်အိပ္ပါ
အိပ်ရေးမ၀တာတြေ၊ အိပ္ခ်ိန္မမွန္တာတြေက သင့်ဦးနွောက်ရဲ့ မွတ်ဥာဏ္စြမ်းအင်တြေကို လေ်ာ့နည်းစေမျွာဖစ်ပြီး သင့်ကို စိတ္ဖိစီးမှုတျြေဖစ္လာစေပါလိမ့်မယ်။
စာကို အကြာကြီးအာရုံစိုက်ပြီး က်က္နိုင္တာမ်ိုးလည်းမရွိတော့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ္ကိုယ် အားမလိုအားမရျဖစ္လာမွာမို့ အိပ္ခ်ိန္မွန္မွန္နဲ့ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပေးတာက အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းတြေထဲက တစ္ခုပါ။
(၂) မနက်စောစော စာက်က္ပါ
မနက်စောစော က်က္တဲ့စာတြေက ဦးနွောက္ထဲမွာ စြဲမြဲစေသလို ပိုပြီးလည်း မွတ္မိလြယ္ပါတယ်။ အိပ်ရေးဝတဲ့မနက်တြေဆိုရင် စိတ္က လန်းဆန်းနေလို့ က်က်သမ်ွစာတြေကို မွတ္မိဖို့ ကူညီပေးတယ်။
ဒီတော့ ညပိုင်းအခ်ိန်တြေထက် မနက္ခင်းတြေမွာ စာက်က္ဖို့ ကြိုးစားရင်း သင့်ရဲ့စာမေးပြဲအခ်ိန်တြေကျိုဖတ်ကေ်္ဖာို့ ကြိုးစားပါနော်။
တစ္ဖက္မွာ အိပ္ခ်ိန္မွန္မွန္နဲ့ အိပ်ရေး၀၀အိပ္ဖို့ လိုအပ်သလို တစ္ဖက္မွာလည်း ခန္ဓာကိုယ်အတြက် အာဟာရျဖစ္မယ့် အစားအစာတြေကို ပုံမွန္စားပြီး အာျးဖည့်ပေးသင့်ပါတယ်။
စာမေးပြဲနီးတဲ့အခါ ပုံမွန္ထက္ပိုတဲ့ ဖိအားတြေကြာင့် အစားအေသာက္ပ်က္နိုင္တာမို့ အစားအေသာက္ပိုင်းကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့လည်း မေမ့ပါနဲ့။
တရားထိုင္တယ္ဆိုတာ စိတ္ကိုတည်ငြိမ္လာအောင် ကြိုးစားတာပါပဲ။ တရားထိုင္တာက သင့်ရဲ့စိတ်အတြက် အာရုံစူးစိုက္မှုကို ပိုလိျု့မင့်မားလာစေမျွာဖစ်ပြီး မွတ်ဥာဏ္စြမ်းအားကိုလည်း ပိုကောင်းလာဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင် စာက်က္တဲ့နေရာမွာ ပိုပြီး အေထာက်အကျူဖစ်ပြီပေါ့။
ငါျေဖမျွေဖနိုင္ပါ့မလား၊ ငါမျေဖနိုင်ရင် ဘျာဖစ်သြားမလဲ၊ ဆိုပြီး အမ်ားကြီးတြေးပူနေမိတာကလည်း သင့်ရဲ့စိတ္ဖိစီးမှုကို အျမန္ဆုံျးမင့်တက်သြားစေနိုင္ပါတယ်။
အေတြးတြေမ်ားလာလေလ ဦးနွောက္က အလုပ္လုပ္ဖို့ နွေးကြေးသြားလေလျဖစ္လို့ စာကိုလည်းလြယ္လြယ္နဲ့ မွတ်္နိုင္မွာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ စာမေးပြဲနီးလာပြီဆိုရင် စာက်က်နေဖို့ကလြဲလို့ တျခားအေတြးတြေကို ခေါင်းထဲကေန ထုတ္ထားလိုက္ပါ။
Sources : Shwemom